विवाहको अर्थ के हो ? के बिहे गर्नु जरुरी छ ? जान्नुस – Online Khabar 24
विवाहको अर्थ के हो ? के बिहे गर्नु जरुरी छ ? जान्नुस
सवप्रथम हामीले बुझ्नुपर्छ कि विवाहको व्यवस्था किन गरिएको हो ? हरेक मानिस, चाहे त्यो पुरुष होस् वा महिला, केही न केही आवश्यकताहरु हुन्छन् ।
यदि मैले तिमीलाई ८ वर्षको हुँदा विवाहको बारेमा सोधेको भए यो प्रश्नको कुनै अर्थ नै हुने थिएन ।
के तपाईलाई आफ्नो जीवनमा मानसिक रूपमा साथी चाहिन्छ ? के तपाईलाई भावनात्मक समर्थन चाहिन्छ ? र, तपाईं आफ्नो शारीरिक आवश्यकताहरू बारे कतिको सोच्नु हुनुहुन्छ ? तपाईंले आफ्नो व्यक्तिगत स्तरमा तिनीहरूको बारेमा सोच्नुपर्छ ।
सबैले विवाह र सन्तान जन्माउनु अनिवार्य वा आवश्यक छ र ? हो, यदि मानव जाति लोपको कगारमा थियो भने, हामी सबैलाई विवाह गर्न र बच्चाहरू जन्माउन सल्लाह दिन्छौं, तर यहाँ मानव जनसंख्या पहिले नै वि’स्फो’टक दरमा बढिरहेको छ । आज यस्तो समय छ कि यदि तिमी बच्चा जन्माउँदैनौ भने तिमी मानव जातिको उपकार गर्दैछौं ।
अर्को कुरा, तपाईंले विवाह र सम्बन्ध विच्छेदको बारेमा एकै पटक कुरा गर्नु हुँदैन तर यी विषय एक आपसमा जोडीएका हुन्छन् । हालसम्म, नेपालमा विवाहको समयमा कसैले सम्ब न्धविच्छे दको बारेमा कुरा गर्दैनन् । यदि केहि समस्या आयो भने यो बिल्कुल गलत हो तर यसलाई ठीक गर्ने कुनै उपाय छैन र उनीहरू छुट्टीनुपर्छ भने यो धेरै दुर्भाग्यपूर्ण छ । तर पनि विवाहसँगै यस विषयमा योजना बनाउनु हुँदैन । यो खबर साभार गरियको हो ।
Prevसाथीकी श्रीमतीलाई दिल्ली पुर्‍याएर बिक्री, यसरी लोभिएकी थिइन् बबिना
nextतपाइँलाई रुघाखोकी लागिरहन्छ ? के गर्ने ? यस्ता छन् उपाय